गोकुलको राजीनामाले ककसलाई प्रश्न ? – Weekly Nepal
गोकुलको राजीनामाले ककसलाई प्रश्न ?
in पत्रपत्रिका — १२ फाल्गुन २०७६, सोमबार १२:०९
काठमाडौं । डेढ वर्षअघिको अडियो एक जना दलालले आफू अनुकूल काँटछाँट गरेर सार्वजनिक गरेपछि गोकुल बाँस्कोटाले आफूमाथि प्रश्न उठेको भन्दै नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिए। उनले आफ्नो दुई लाइनको राजीनामापत्रमा ुआफूमाथि प्रश्न उठेकालेु भन्ने शब्द किन राखे रु यसबारेमा धेरैको चासो गएको देखिएको छैन । तर बाँस्कोटाले दुई लाइनको राजीनामामा यो वाक्य राखेर नेकपाक केही नेतामाथि नैतिक प्रश्न खडा गरेको चर्चा चलेको छ। ुबाँस्कोटाले ७० करोड कमिसन डिल गरको। भनिएको अडियोको आधिकारिकता पुष्टि भएको छैन । जोसँग ७० करोडको डिल गरेको भनिएको छ, ती व्यक्ति स्वीस कम्पनीका प्रतिनिधि नभएको दूतावासले प्रस्ट पारिसकेको छ । प्रधानमन्त्रीले २ महिनाअघि नै अडियो सुनेको भनिए पनि तिनै व्यक्ति विजय मिश्रले आफूले प्रधानमन्त्रीलाई अडियो नदिएको पनि बताइसकेका छन् । यतिसम्मकी पछिल्लो समय त उनले गोकुल बाँस्कोटालाई समेत आफूले नचिनेको भन्दै महरा प्रकरणमा रोशनी शाहीले दिनहुँ बोली फेरेको शैलीमा प्रस्तुत हुन थालेका छन् । रोशनी शाहीले महराले राजीनामा दिइसकेपछि आफूमाथि कुनै दुर्व्यवहार नभएको भने पनि महराले कानुनी लडाइँ लड्नुपर्यो । विजयप्रकाश मिश्रले बोली फेरे पनि गोकुल बॉस्कोटाले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिइसकेका छन् र अख्तियारलगायतका राज्यका संवैधानिक निकायले गर्ने अनुसन्धानलाई सघाउने बताइसकेका छन् । बाँस्कोटामाथि प्रश्न उठ्यो, उनले राजीनामा दिए । अख्तियारले सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरणका कागजपत्र लगेर अनुसन्धान गरिरहेको छ । बाँस्कोटा अब दोषी भए पनि चोखिए पनि अख्तियारको जिम्मामा पुगिसकेका राजीनामा दिनु उच्च नैतिक संस्कार हो, त्यसमा गोकुल बाँस्कोटाले एक दिन पनि ढिला गरेनन् । तर उनले जाँदाजाँदै आफ्नै पार्टीभित्र र अन्य दलमा रहेका दागीहरूमाथि पनि नैतिक प्रश्न खडा गरेका छन् । प्रश्न उठ्नेबित्तिकै पदबाट राजीनामा दिनपर्ने हो भने खानेपानी मन्त्री बिना मगरमाथि ५ अर्बको डिल नमिलेपछि आफूलाई सरुवा गरेको भनेर तत्कालीन सचिव गजेन्द्र ठाकरले सार्वजनिक रूपमै बोलेका थिए । त्यो त गोकुल बाँस्कोटाको जस्तो अडियो होइन कि सचिवजस्तो व्यक्तिले भिडियोमै बोलेका थिए। त्यसो त मेडिकल कलेज सञ्चालक दुर्गा प्रसाईले नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ र शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले भनेको भन्दै चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरीले आफसँग २० करोड रुपैयाँ घूस मागेको पत्रकार सम्मेलन गरेरै बताएका थिए । गिरीले घस मागे को करा नारायणकाजीदेखि प्रचण्डसम्मलाई भन्दा पनि सुनुवाइ नभएको भन्दै उनी पत्रकार सम्मेलन गर्न बाध्य भएका थिए। यस प्रकरणमा न त गिरीले राजीनामा दिए, नत नारायणकाजी र गिरिराजमणि नै जवाफ दिए । प्रश्न उठेकै आधारमा राजीनामा दिने हो भने अब गोकुल बाँस्कोटाको नजिर नेकपामा अरू नेताको हकमा लाग होला कि नहोला अहिले यो प्रश्न भित्रभित्रै उठेको मात्र छ, यसले सार्वजनिक बहसको रूप नलेला भन्न सकिन्न । प्रश्नकै कुरा गर्ने हो भने त नेकपाका अध्यक्षदेखि सभामुखसम्म, प्रमख विपक्षी दलका नेता शेरबहादर देउवादेखि गगन थापासम्म प्रश्नभन्दा माथि छैनन । उनीहरूमाथिका कतिपय अभियोग त अहिले पनि विभिन्न निकायमै विचाराधीन नै छन् ।
गोकुल बाँस्कोटाले सेक्युरिटी प्रेस खरिद गर्ने निर्णय गरेका थिएनन् । उनले हस्ताक्षर गरेर कुनै कागज अघि बढेको पनि छैन । कुन देशलाई जिम्मा दिने भन्ने निर्णयसमेत नहुँदै अडियो काण्ड बाहिर आयो भने सम्बन्धित कागजात ससदीय समितिले पनि हेरिसकेको छ । गोकुलले अडियो प्रकरणबाट राजनीतिक बदनामी र अति भोगे पनि कानूनी रूपमा उनीमाथि कुनै कारबाही गर्ने ठाउँ किन छैन भने सेक्युरिटी प्रेस खरिद कोसँग गर्ने भन्ने निर्णय नै उनले गरेका छैनन् ।
तर प्रश्न उठेपछि राजीनामा दिएर गोकुल हिडेपछि अब जोकोहीमाथि पनि प्रश्न उठेपछि राजीनामा दिनुपर्ने नजिर बस्लारु सायद यो प्रश्न अब नेकपा वृत्तमा मात्र होइन, सार्वजनिक रूपमा सबैमाथि उठ्नेछ । कुनै व्यक्तिले डेढ वर्षअघिको अडियो मिलाएर काटकट पारेर सार्वजनिक गर्दा गोकुलले राजीनामा दिए भने सचिवले खुलेआम ५ अर्बको आरोप लगाएकी मन्त्री बिना र दुर्गा प्रसाईले २० करोडको अभियोग लगाएका मन्त्री तथा नेताले राजीनामा दिनु नपर्ने प्रश्न त खडा भएको छ।
स‌ंरक्षित पुराना सामाग्री Select Month April 2020 (34) March 2020 (578) February 2020 (477) January 2020 (816) December 2019 (69) September 2019 (155) August 2019 (645)